मृत्यूसँग लड्दै सुनुवार, सहयोगको अपिल - Nayabulanda.com
मृत्यूसँग लड्दै सुनुवार, सहयोगको अपिल
जीवन लिम्बू २० बैशाख २०७६, शुक्रबार ०९:५३ 746 पटक हेरिएको
इलाम : बिदेशमा पसिना बगाएर त्यो पसिनाको एक एक थोपाले स्वदेश फर्केर आफ्नो संसार सजाउने कसको मन हुदैन र ? हो मुलुकको अवस्था यस्तै छ । दैनिक लाखौँ युवा जनशक्ति खाँडिमा रोजगारीको खोजी गर्दै तातो घाममा रगत बगाउन तयार छन् यहाँ । आर्थिक अवस्था कमजोर र आम्दानीको राम्रो स्रोत नहुदा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने क्रम अझै रोकिएको छैन् । बिदेशमा पशिनासँग साटेर दुई चार पैषा कमाई जीवीको पर्जन गर्ने कस्लाई मन नहोला ? हो यसका लागि नै रात दिन नभनी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नै नगरी परिवारका निम्ति आफ्नो ज्यान नै दिएर भाषिएका हुन्छन् अधिकांश नेपाली युवाहरु । कति ले त विदेशमा श्रम गरेर राम्रो आम्दानी पनि गरेका छन् । र घर परिवार पनि राम्ररी धानेका छन् । तर त्यसरी विदेशिएका कत्ति युवाहरु भने विभिन्न रोग लिएर पनि स्वदेश फर्कने गरेका छन् ।
हो त्यँही मध्येका एक अभागी पात्र वने दुवै मृगौला पिडित आशिष सुनुवार । सानो उमेरमा नै घरायसी व्यवाहार सम्हालेर अघि बढेका सुनुवार सायद आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न भनेरै विदेशिएका थिए । जीवनको पहिलो खुसि (वैवाहिक जीवन) मा नै कल्पना गर्न नसकिने चोट भोगेका उनी आफै अहिले जीवन र मृत्युको दोसाधमा अड्कीएका छन् । र मृत्युलाई जित्न लडिरहेका छन् । इलाम जिल्ला साविक इभाङ गाविस वडा नं. ६ (सिङ्लावू) हाल माङसेवुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ निवासी सुनुवारको अहिले दुई वटै मृगौलाले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पगेका छन् । श्रीमती र एक छोरी भएका उनी वाच्न हरदम कोशिस गरिरहेका छन् । उनी भन्छन् “मलाई बचाई दिनुहोस म तपाईहरुको यो धर्म कहिल्यै विर्सने छैन । मेरी श्रीमती र मेरी छोरीलाई म छाडेर जान सक्दीन ।”
हो उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि केही वर्ष अघि बहराईन गएका थिए । तर समान्य विरामी भईरहेका भएकाले उनी केही महिना अघि स्वदेश फर्केका थिए । र उनले धरानको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिक्षण गराउदा दुवै मृगौला काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको थाहा पाएका थिए । र लगत्तै अस्पतालले उनलाई काठमाण्डौ रिफर गरे । र अहिले सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय मृगौला प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा उनको उपचार भईरहेको छ । उनको उपचारका लागि अस्पतालले छिटो भन्दा छिटो मृगोला प्रत्यारोपणा गर्नु पर्ने छ र यसका लागि अस्पतालले निक्कै मोटो रकम आवश्यक रहेको बताए पछि अझ चिन्ति वन्दै गएका छन् उनी । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनले सवै स्वदेशि तथा विदेशी इस्ट मित्रहरुसँग सहयोगको याचना गरेका छन् ।